လူသတ်သမား '' လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ '' မိတ်ဆက်နယူးထုတ်လုပ်မှုဂီတစီးရီးသီချင်းများ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » လူသတ်သမား '' လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ '' မိတ်ဆက်နယူးထုတ်လုပ်မှုဂီတစီးရီးသီချင်းများ
လူသတ်သမား '' လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ '' မိတ်ဆက်နယူးထုတ်လုပ်မှုဂီတစီးရီးသီချင်းများ
တကျိပ်အယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူဖွင့်ဖို့ unscripted ရုပ်မြင်သံကြားဖန်တီးမူရင်းတေးဂီတစုစည်းမှု။
စန်တာမော်နီကာ - လူသတ်သမားသီချင်းများတစ်ဦးက Universal ထုတ်ဝေရေးထုတ်လုပ်မှုဂီတကုမ္ပဏီ, ယနေ့၏ပစ်လွှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ လက်တွေ့ဘဝမှာတော့အသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်မှုဂီတတံဆိပ် unscripted ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်သီချင်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
အသစ်တံဆိပ်အထူးအားလုံးအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအမျိုးအစားများဖန်တီးမူရင်းပုဒ်ဆယ်အယ်လ်ဘမ်နဲ့အတူမိတ်ဆက်နှင့်ဂီတစတိုင်များ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ကးတွေရဲ့ array spanning ။ တစ်ခုလုံးကို catalog များကကြီးကြပ်လျက်ရှိသည် လူသတ်သမားသီချင်းများ ကုမ္ပဏီ၏ထိပ်တန်း-performing အယ်လ်ဘမ်၏ 300 ထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်ခဲ့သူအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူရိုင်ယန်ဖာရ-Daple ။ လက်တွေ့ဘဝမှာတော့'' s ကိုသစ်ကိုဖြန့်ချိပုမှတဆင့်လိုင်စင်နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းတို့အတွက်ချက်ချင်းရရှိနိုင်ပါ လူသတ်သမားသီချင်းများ က်ဘ်ဆိုက်။ အသစ်တံဆိပ်ယခုနှစ်၏ကျန်ရှိသောကျော်တစ်ဦးအပိုဆောင်း 20 အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ unscripted ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်သူအရည်အသွေးမြင့်ဖို့ချက်ချင်းလက်လှမ်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဂီတလိုအပ်ချက်, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ပြိုင်ဆိုင်မှု, စစ်မှန်တဲ့-ရာဇဝတ်မှု, ခရီးသွား, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်အခြားလူကြိုက်များပြပွဲကို formats လိုက်. အလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည့်သီချင်းများဖြည့်ဆည်းကူညီပေးဖို့တီထွင်ခဲ့သည်။ ဂီတအဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအတွေ့အကြုံ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, လက်တွေ့ဘဝမှာတော့'' s ကိုသီခငျြးမြား, စိတ်ခံစားမှုမှ play ထောက်ခံမှုကြံစည်မှုပွေီးမှနှင့်တင်းမာမှု, အရေးယူနှင့်ဟာသအချိန်လေး underscore ။ အဆိုပါ catalog ကိုဖြတ်ပြီး, ဂီတစတိုင်များမြို့ပြ / hip-hop, ခံစားရ-ကောင်းသောကျောက်, သီခငျြး Indie, အထူးနှုန်းများ / နောက်တွဲယာဉ်, ဟာသစည်းချက်နှင့်အထိခိုက်မခံတဲ့ underscores ပါဝင်သည်။ အဆိုပါတံဆိပ်ကိုလည်းအထူးနှုန်းများ, အမြည်းများနှင့်အခြားစျေးကွက်မီဒီယာများအတွက်သင့်လျော်သောအပုဒ်ပေးထားပါတယ်။
"ဂီတများအတွက်ဝယ်လိုအားအဖြစ်မှန်တီဗီ spectrum ကိုဖြတ်ပြီးပြပွဲ၏ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်," ဖာရ-Daple ကဆိုသည်။ "ထုတ်လုပ်သူများဂီတတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်သူတို့လျင်မြန်စွာလိုအပ်ပေမယ့်သူတို့မှာလည်းခေတ်ပြိုင်သံကိုရှိတယ်လို့ဂီတချင်ကောင်းမွန်စွာထုတ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ပြပွဲ၏သေံနှင့်ဇာတ်ကောင်ကိုက်ညီ။ ကျွန်တော်တို့သည်အလတ်ဆတ်မူရင်းနှင့်စွယ်စုံဖြစ်ကြောင်းပုဒ်အတွက်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအသုံးပြုမှုကို လိုက်. ပါတယ်။ "
ဘို့ လက်တွေ့ဘဝမှာတော့'' s ကိုကနဦးအယ်လ်ဘမ်, ဖာရ-Daple အပေါ်ကိုဆွဲငင် လူသတ်သမားသီချင်းများထူထောင်တေးရေးနှင့်ထွန်းသစ်စအနုပညာရှင်များ '' နက်ရှိုင်းသောအခွက်တဆယ်ရေကူးကန်။ ပံ့ပိုးအနုပညာရှင်အဘယ်သူ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဇယား-topping မှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင်အဖြစ်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ကြော်ငြာစီမံကိန်းများနှင့်အတူအလုပ်ပါဝင်သည်အများအပြားအခြားသူတွေအကြားချားလ်စ် "Chizzy" Stephens III ကိုအဲလက်စ် "ဖျော်ရည်" Hitchens, Aire Atlantica နှင့် Fred သည် Kron, ပါဝင်သည်။
"ကျနော်တို့ကတေးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်သူများဖွံ့ဖြိုးသို့နှိပ်နေတော်မူသောများစွာသောအဓိကတံဆိပ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အဘယ်သူ၏ပညာရှိလူကြိုက်များဂီတအတွက်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်းနေကြတယ်" ဟုဖာရ-Daple ကဆိုသည်။
လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ သီခငျြးမြား, ချောမွေ့စွာအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ပေါင်းစည်းမှုစရာဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားမြောက်မြားစွာပြင်ဆင်ရန်အချက်များပါဝင်သည်နှင့်များစွာသောအခြားရောသမမွှေများနှင့်အတူ လာ. , အဓိကအားနှင့်ဂီတကိရိယာများနေကြသည်။ လူသတ်သမားသီချင်းများ၎င်း၏သစ်ကိုတံဆိပ်များအတွက်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများကြီးကြပ်တံ့သော, HGTV ရဲ့အပါအဝင်မြောက်မြားစွာ unscripted စီးရီးများအတွက်ဂီတများကိုတစ်ဦးတွင် track record ရှိပါတယ် ဘဟားမားဘဝ, ဟင်းချက် Channel ကိုဖွင့် ဟောငျးကျောင်းဒါဟာဟင်းချက်, VICELAND ရဲ့ အဆိုပါ Ice Cream ပြရန် နှင့် Discovery ရဲ့ ရွှေ Rush.
လူသတ်သမားသီချင်းများ ထုတ်လုပ်မှုဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာနှင့်အပြန်အလှန်မီဒီယာများအတွက် Pre-ရှင်းလင်းဂီတများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 3,400 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်များ, အထဲကနေ 44 တက်ကြွအယ်လ်ဘမ်ထက်ပိုမိုနှင့်အတူ လူသတ်သမားသီချင်းများ catalog တိုင်းအမျိုးအစားအထိချဲ့ကာနှင့်ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးဆန်းသစ်တေးရေး, အနုပညာရှင်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူအချို့ထံမှမူရင်းအကျင့်ကိုကျင့်ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါပရီမီယံ catalog ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သီးသန့်အသံသွင်းခြင်းနှင့်အသစ်သောဂီတ updates များကိုအတူတိုးမြှင့်ထားသည်။ friendly, တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ထောက်ခံမှုဂီတရှာဖွေရေးအထူးကုများနှင့်လိုင်စင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံအဖွဲ့ကတဆင့်အမြဲရရှိနိုင်ပါသည်။ ဂီတကိစ္စရပ်များမှာထုတ်လုပ်မှုဂီတကျွမ်းကျင်သူများအပေါ်အားကိုးရတဲ့အခါ လူသတ်သမားသီချင်းများ.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.killertracks.com သို့မဟုတ် Twitter နဲ့ Instagram ကိုအပေါ် @killertracks လိုက်နာပါ။
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု ဂီတ ထုတ်လုပ်မှုဂီတ လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-05-16
ယခင်: VFX ကို Legion of Honour '' Madam အတွင်းရေးမှူး '' အဘို့အ 100 + VFX ဖန်တီးလိုက်တဲ့
နောက်တစ်ခု: အကယ်ဒမီဆုအတွက်အမည်တင်သွင်းအသံ Editor ကိုမာတင် Hernandez နှင့်အတူရုပ်ရှင်မီဒီယာအသင်းများအသံန်ဆောင်မှုများစတင်ရန်မှ